Sarkaal Katirsanaa Melleteriga Dowladda Federaalka Oo Lagu Dilay Degmada Yaaqshiid.
Thursday March 29, 2018 - 14:04:13 in Wararka by Super Admin
Xoogag hubeysan ayaa markale magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada Melleteriga dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maanta duhurkii ayay rag bastoolado ku hubeysan agagaarka warshaddii hore ee Baastada ku dileen sarkaal darajadiisa ciidan aheyd Korneel iyo askari ilaalia u ahaa waxaana mas'uuliyadda weerarkan sheegatay Xarakada Al Shabaab.
"Howlgal Gaar ah oo ciidamada Shabaabul Mujaahidiinta Barqo nimadii maanta ay ka fuluyeen agagaarka dhismaha Xarunta Warshadii hore Baastada degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho waxey ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan dowlada Ridada" ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Sarkaalkan la dilay ayaa magaciisa lagu soo gaabiyay Jarane waxa uu ahaa Korneel katirsan melleteriga dowladda Farmaajo wuxuuna caan ka ahaa degmada Yaaqshiid halkaas oo uu ka fulin jiray howlgallada raafka ah ee ka dhanka ah shacabka Rayidka ah.
Dilkan Sarkaalkan ayaa kusoo aadaya xilli qarax shalay gelinkii dambe ka dhacay isgoyska Zoobe lagu dilay mid kamida Howlwadeennada Baarlamaanka dowladda Federaalka, habeen hore weerar ka dhacay xaafadda Maana Booliyo ee degmada Shibis waxaa lagu dilay xildhibaanad katirsaneed Baarlamaanka mamaulka Koonfur Galbeed.